NepalManch :: ‘राजनीतिलाई जनतासँग र जनतालाई विकाससँग जोड्ने अभियानको थालनी गरेको छु’
‘राजनीतिलाई जनतासँग र जनतालाई विकाससँग जोड्ने अभियानको थालनी गरेको छु’
नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशनबाट सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको छ । यसपटक केन्द्रीय कार्यसमितिमा आधा भन्दा बढि नयाँ अनुहारले प्रवेश पाएका छन् भने युवाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । तिनै मध्येका एक हुन्, नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष नैनसिंह महर । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका महर यतिबेला पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको भूमिका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा निकट मानिने महरको गृहजिल्ला पनि डडेल्धुरा नै हो । लामो राजनीतिक उतावचडाव भोग्दै केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएका महर कांग्रेसका लोकप्रीय युवानेतामध्येका एक हुन् । उनी कांग्रेसभित्र अध्ययनशील र बैचारिक नेताका रुपमा पनि चिनिन्छन् । उनले शिक्षा र राजनीतिक विषयमा पुस्तक लेखेका छन् ।
गरिव परिवारमा जन्मिएर कठिन परिस्थितिमा पनि लोकतन्त्रका पक्षमा संघर्ष गर्दै आएका कांग्रेसका युवा नेता महरसँग विद्यार्थी राजनीतिदेखि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदासम्मका अनुभव र संघर्षका बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौं ।
१४ औं महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित महरको आगामी राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? उनले अगाडि सारेका १४ एजेण्डा कार्यान्वयन कसरी हुन्छन्, यी र यस्तै विषयमा नेता महरसँग नेपालमञ्चकर्मी इन्दु धामीले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअघि तपाईंले १४ एजेण्डा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । अब ती एजेण्डा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ?
१४ औँ महाधिवेशनमा १४ वटा एजेण्डा मैले प्रस्तुत गरेको थिए, जसमा १४ औँ महाधिवेशनको कार्यभार, सशक्त कांग्रेसको बहुमतको सरकार मुख्य नारा नै थियो । अब त्यो १४ औं महाधिवेशनका एजेण्डाभित्र सक्रिय सदस्यता वितरणको मापदण्डदेखि लिएर क्रियाशील सदस्यतामै समस्या रहेको औँल्याइएको थियो।
ठिक मापदण्डका आधारमा सदस्यता दिनुपर्नेदेखि लिएर युवा कांग्रेसको स्थापना, पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि छुट्टै व्यवस्था, बीपी विचारको समय सान्दर्भिक कार्यान्वयनलगायतका विषय थिए । त्यसमा पनि मेरा केहि विशेष महत्वका एजेण्डाहरु छन्, जुन मेरो ३० वर्षे राजनीति जीवनमा मैले सधैं नै उठाउँदै आएको छु ।
निशुल्क वैज्ञानिक शिक्षा, गुणस्तीय स्वास्थ्य र व्यवस्थित यातायात तथा सञ्चारसँगै रोजगार, गुणस्तरीय जीवनका आधार भन्ने कुरालाई सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने लगायतका विषय मेरो एजेण्डा भित्र राखिएका छन् ।
त्यसमा पनि कांग्रेसको राजनीतिलाई जनतासँग जोड्ने र जनतालाई विकाससँग जोड्ने मेरो लक्ष्य छ । राजनीति र जनताबीच अहिले ठूलो खाडल छ । दलका नेताहरु एक ठाँउमा छन्, जनता अर्को ठाउँमा छन् । विकास केन्द्रित राजनीति अगाडि बढेको छैन । त्यसकारणले आर्थिक उन्नति हुने किसिमको सबैले बलियो नेपाल बनाउनको लागि आर्थिक समृद्धि नल्याइकन हुँदैन । त्यसकारण यी विविध कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ ।
भोलि फेरि कांग्रेसको बहुमतको सरकार आउने सम्भावना सबैले देखेकै छन् । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले जनताका सवालहरुलाई जनतासँगै रहेर बसेर जनताको पार्टी बन्नुपर्ने जरुरी छ र जनताले चाहेअनुसार हामीले अ‍पेक्षित विश्वास दिन सकेका छैनौँ । तथापि हामीले पुरा गर्नुपर्छ त्यसकारण नैतिक रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यसरी हेर्दा राजनीतिमा जे पनि सम्भव भन्ने छ तर राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने हुँदैन । राजनीति सही कुराको लागि मात्र हुनुपर्छ भनेर एजेण्डा प्रस्तुत गरेको थिए । अब यी सबै कुराहरुलाई कार्यान्वयन तर्फ लैजाने हो ।
पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो । कत्तिको चुनौति वा सहज अनुभव गर्नुभयो ?
मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने २०४७ सालमा असिग्राम माध्यमिक विद्यालय डडेल्धुराको रुपालबाट म नेविसंघको अध्यक्ष बनेको थिए। त्यो बेला आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवा, एनपी साउँदलगायत नेताहरु मेरा स्कुलमा पुग्नु हुन्थ्यो । त्यहि वर्षको कार्तिक १६ गते जस्तो लाग्छ मलाई । मैले पहिलो पटक ठूलो मञ्चमा भाषण गरेको थिए, नेविसंघको अध्यक्षको हैसियतमा । त्यो दिनदेखि महाकालीको तिरबाट म्याराथनको दौडमा हरेक किसिमका आरोह अवरोहहरु आइरहे । ती आरोह अवरोहहरुलाई पछाडि पार्दै म नेविसंघको जिल्ला अध्यक्ष भए । त्यसपछि नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य, उपाध्यक्ष हुँदै म अध्यक्ष पनि भए । यी सबै कुरामा मैले मेरो साथीभार्इ तथा सहपाठीहरुको महत्वपूर्ण साथ सहयोग पाएको छु ।
मध्यम वर्गीय परिवारबाट अहिलेको अवस्थासम्म आउँदा स्वभाविक रुपमा मलाई धेरै समस्या तथा चुनौतीको सामना गर्नु परको थियो । अहिलेको अवस्थामा देशभर एउटा पहिचान बनाइसकेको अवस्था छ । मैले आफ्नो एजेण्डालाई देशभर लैजाने गरेको छु । त्यसकारण अहिलेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि मैले एजेण्डाको राजनीति सुरुवात गरेको छु ।
तसर्थ चुनौती ठूलो नहुनका लागि पारिवारिक विरासत ठूलो हुनु पर्यो । अनि या त आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवार हुनुपर्यो । यी सबै केही थिएन मसँग । म यहाँसम्म संर्घषबाटै आएको हुँ । पछिल्लो समय आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको मानिस सौखिनको लागि पनि राजनीतिमा आउने गर्छन् । तथापि त्यो राजनीतिभन्दा संर्घषको राजनीति विविध रुपमा भिन्न हुने गर्दछ । त्यसकारण पनि राजनीतिमा संर्घष नगरी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न ।
तपाई नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष पनि रहनुभयो । तर कांग्रेस भ्रातृ संगठनहरुको अवस्था त भद्रगोल छ नि । कसरी सुधार्नुहुन्छ ?
कांग्रेस पार्टीभित्र भ्रातृ संस्थाको अवस्था ठिक छैन । सबै समस्याग्रस्त छन् । यसलाई हामी केन्द्रीय कमिटिको बैठक मार्फत सही बाटोमा ल्याउँछौ र नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार नै कांग्रेसका सबै भ्रातृ संस्थाको सुधार गर्छौँ ।
हालै तपाईं सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाको भ्रमण गरेर फर्किनुभएको छ । सुदूरपश्चिमको विकासको अवस्था कस्तो पाउनु भयो रु
यो हामीले सुरुवात मात्रै गरेका हौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँग कांग्रेसले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको विद्यमान अवस्थाको अवलोकलन र आगामी दिनको कार्ययोजना तयार गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले हामी सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला पुग्यौं। त्यहाँका राष्ट्रिय योजनाका साथै स्थानीय नागरिकँग पनि संवाद ग¥यौं ।
सुदूरपश्चिमको जिल्लामा वास्तवमा बाटो एकदमै कठिन छ, सबै जिल्लामा । बझाङमा भन्ने हो भने सेती किनारैबाट बाटो गएको थियो । दार्चुलाका सडकको अवलोकन गरेका थियौँ । भारत सरकारले बनाउने भनेको छ तिकंर क्षेत्रमा त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा छ ।
त्यस्तै बाजुरा मार्तडी जाँदा खेरी पुरै डाँडा नै भाँसिएको अवस्थामा थियो । त्यो ठाउँमा माथिबाट रुट परिवर्तन गरेर बाटो लैजानु पर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी लामो समय सपनामै रहेको पश्चिम सेती आयोजना, गेटा मेडिकल कलेज, सँगसँगै बझाङ हुँदै ताक्लाकोट जाने बाटोका कुरा भयो, सेती लोकमार्गको कुरा भयो, डोटी पुग्ने फास्ट्रयाकको कुरा भयो, डडेल्धुरा जोड्ने सडकको कुरा भयो ।
पञ्चेश्वर, महाकाली करिडोर लगायत धेरै कुराहरु सुदूरपश्चिमका जनताका साझा योजना हुन् र ती नेपाली जनताका पनि साँझा योजना हुन् । तिनको विकास भएपछि देशको लागि योगदान दिन सकिन्छ । यी यस्ता कुराहरुमा अहिले बहस मात्रै भइरहेको छैन कि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि संवादमा छौँ ।
मैले यहाँलाई अगाडि भने राजनीतिलाई जनतासँग जोड्ने र जनतालाई विकाससँग जोड्ने अभियान सुदूरपश्चिमबाट सुरुवात गरेका छौँ । यसलाई आदरणीय नेता पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ज्युसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ । यस अभियानलाई देशभरि अगाडि बढाउने परिकल्पनालाई बोकेर अघि बढेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री पनि तपाईंकै जिल्लाबाट हुनुहुन्छ । सरकार पनि अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा छ । अब समग्र सुदूरपश्चिमका समस्या प्रधानमन्त्रीसम्म कसरी पुर्‍याउनु हुन्छ ?
अब यसमा हामी एकदमै समन्वय भएरै गएका छौँ । प्रधानमन्त्री ज्यू विकासको लागि चिन्तित हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म गर्न नपाएको विकास गर्न पाए हुन्थ्यो । समग्र देशको र सुदूरपश्चिमको हकमा उहाँको चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ । त्यसमा हामीले यति मात्रै भनेका छौँ कि मैले अघि भनेका योजना केही समयमा नै अगाडि बढाउने कुरामा हामीले प्रयास थालेका छौँ । केही समयभित्र विकासका काम अगाडि बढेको देख्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको एउटा केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा कत्तिको प्रभाव पार्न सक्दोरहेछ ?
पार्टीमा भूमिकाकै कुरा गर्ने हो भने १० लाख क्रियाशी‍ल सदस्यको नै केहि नै केहि भूमिका हुन्छ । सबैको आआफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ र पदीय भूमिका हुन्छ । सबैले आफ्नो भूमिका नखेलिकन कांग्रेस पार्टी नै अगाडि बढ्न सक्दैन ।
अब देशमा तीन तहको आमनिर्वाचन हुँदैछ । तीन तहका चुनाव लड्नका लागि हामीले आफूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु पर्नेछ । त्यसका लागि पार्टीका सबै संगठनहरु सक्रिय बनाउन जरुरी छ ।
सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरुलाई क्रियाशील बनाउने समय आएको छ । त्यसकारण कांग्रेस पार्टीलाई बलियो र देशकै पहिलो पार्टी बनाउन केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले कांग्रेसको विधानले दिएको अधिकार र हाम्रा आफ्ना योजनाहरुलाई मिलाएर जनताका बीचमा जाने तयारीमा छौं । त्यसका लागि कांग्रेस एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्छ ।